I-GUY ENTSHA idinga ukusiza i-AI Ukukhishwa kwezingxenyekazi zezindiza, i-KLAS, i-KJFK & Umbuzo Omningi
Umbuzo I-GUY ENTSHA idinga ukusiza i-AI Ukukhishwa kwezingxenyekazi zezindiza, i-KLAS, i-KJFK & Umbuzo Omningi
unyaka 1 2 edlule - unyaka 1 2 edlule #1208 by I-PROSTOCK
FSX-SE Windows 10 - Ngilande i-KLAX Airport namuhla futhi ngabheka. Izindawo ezinhle kodwa zidumaze kancane ngokuntuleka kwe-AI nomsebenzi ezungeze isikhumulo sezindiza. Nginezilungiselelo zami ku-Full 100% yako konke ngamanani amahle wohlaka. Umbuzo wami: Ngabe kukhona ukulanda kwe-AI okutholakalayo okuzogcwala zonke izikhungo zezindiza noma izikhungo zezindiza ezikhethiwe? Angitholanga lutho futhi angazi ukuthi ngibheke kuphi. Ngiyabonga nganoma yiluphi usizo.
Ukuhlela kokugcina: Unyaka we-1 izinyanga ezingu-2 ezedlule I-PROSTOCK.
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #1224 by i-hofnerguy
Ngifisa sengathi ngazi ... Nginenkinga efanayo
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #1227 by Lingwell18
lokhu kungase kusize www.justflight.com/product/traffic-global . Imoto nje isetshenziselwa ukwenza enye ebizwa ngokuthi i-Traffic 360..yicabanga ukuthi ihle kakhulu. inikeza izindiza, imoto yesikhumulo sezindiza, amasevisi kanye nemigwaqo yomphakathi emigwaqweni / emigwaqweni njll. I-los angeles ne-traffic 360 iyibona ukubona. Ngicabanga ukuthi bahamba nge-diosconitinued traffic 360..ngakwazi ukuthola inguqulo ebhokisini ku-ebay / amazon.
Isikhathi ukudala page: 0.193 imizuzwana